တရားဝင် Sony မှ Android 6.0 Marshmallow ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည် Androidsis
Francisco Ruiz | | NOTICIAS, Sony က, Android ဗားရှင်း
သင့်တွင်ဂျပန်အမှတ်တံဆိပ် Sony Xperia ၏ terminal တစ်ခုရှိပြီးသင့် Android terminal သည်တရားဝင်လမ်းပြမြေပုံတွင်ပါမပါကိုသင်သိလိုလျှင်။ Sony မှ Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်ဒီအချိန်မှ စ၍ သင်ဟာမှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုသံသယရှိစရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို Sony ရဲ့တရားဝင်ထုတ်ကုန်များစာရင်းမှာအရင်ဆုံးဒီ Android version ကိုအဆင့်မြှင့်တင်နိုင်မယ်လို့သင့်ကိုပြပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာပြောနှင့်မူအရဒီဖော်ပြခဲ့တဲ့ရပါမည် တရားဝင်အတည်ပြုချက်မရရှိသေးတဲ့ပေါက်ကြားစာရင်းတစ်ခုပါ လူကြိုက်များသောဂျပန်နည်းပညာအမှတ်တံဆိပ်ကဒီပစ္စည်းတွေဟာသေချာပေါက်ပါ ၀ င်ပါတယ် တရား ၀ င် Sony ၏ Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ.
1 အားလုံး၎င်း၏အသစ်ဆိပ်ကမ်း၏ပထမ ဦး ဆုံး
အားလုံး၎င်း၏အသစ်ဆိပ်ကမ်း၏ပထမ ဦး ဆုံး
ယုတ္တိနှင့်ယူဆရသည်နှင့်အမျှဂျပန်နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီသည် Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်မည့်ပထမဆုံးဆိပ်ကမ်းများသည် နောက်ဆုံးဘာလင်အတွက် IFA15 န်းကျင်တင်ပြခဲ့သည်။ ဒီတော့ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့် Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်သင့်သည့် Sony terminal များ သူတို့ကအောက်ပါဖြစ်သင့်သည်
ဂျပန်နိုင်ငံစုံနိုင်ငံစုံ၏အဓိကအချက်အချာသုံးနေရာအတွက်ဤနောက်ဆုံးသတင်းကို၎င်းသည်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်ဟုယူဆခြင်းသို့မဟုတ်ခန့်မှန်းခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည် လာမည့်နှစ် 2016 ၏ပထမသုံးလပတ်အဘို့အ OTA မှတဆင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏.
Sony flagship အသစ်သုံးခုကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Sony Xperia Z5 အကွာအဝေးသုံးခုကို IFA15 မှာဖြန့်ချိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အကွာအဝေးကိုသတိမပြုမိဘဲထုတ်ဖော်ပြသနိုင်လိမ့်မယ်။ Sony Xperia Z နှင့် Sony Xperia Z1 တို့မှထုတ်ပယ်ခြင်း.
ဒီတော့ Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန် Sony မှကြိုတင်ယူဆထားသည့်စာရင်း အောက်ပါဆိပ်ကမ်းများဖြစ်လိမ့်မည်:
မူအရ Sony မှတရားဝင်အတည်ပြုချက်မရှိခြင်းသည်၎င်းသည်ဌဖြစ်သည်ဂုဏ်တင်မှုအတွက်ရွေးချယ်ခံရခြင်းဖြစ်ပြီး Android 6.0 Marshmallow သို့တရားဝင် Sony updates များကိုလက်ခံရရှိသည်Android 6.0 Marshmallow ကို အခြေခံ၍ Cooked Roms ကိုထုတ်လွှတ်မည့်ကြီးမားသည့် Android developer အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကျန်သူများသည်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Sony က » တရားဝင် Sony မှ Android 6.0 Marshmallow သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်
Imladris Moreindil ဟုသူကပြောသည်
Xperia Z, ချက်ပြုတ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်
Imladris Moreindil သို့ပြန်သွားပါ
her သတာ Caballero Jimenez ဟုသူကပြောသည်
သတင်းကိုပိတ်ထားတယ်၊ Z3 ကိုအသစ်ပြောင်းနိုင်သလားသိလား။
Esther Caballero Jimenez အားစာပြန်ပါ
Nope, နောက်ဆုံးပေါ်ပထမ ဦး ဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်
ဒံယလေသ Donatini ဟုသူကပြောသည်
haha haha ​​ငါ z3 အတွက်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့်သတင်းမပါသည့် Lollipop ကိုမျှော်လင့်ပါသည်
Daniel Donatini အားပြန်ကြားပါ
Pfff အကယ်၍ သင် update ကိုစောင့်နေသည့်သေမည့်စောင့်ရှောက်သူများကြောင့်ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်၌ z2 ရှိပြီး flashtool မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်သည် free Europe rom ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး install လုပ်ပြီးသင်နောက်ဆုံးပေါ်ရှိလိုပါကကျွန်ုပ်သည်နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းကိုရယူထားသည်။ စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုဘဲနောက်ဆုံးသတင်းများကိုသင်လုပ်သင့်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အာမခံချက်ကိုပျက်ပြယ်စေသည့်အပြင်အမြစ်ကိုအမြစ်လည်းပျောက်စေနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ
ဒေးဗစ် Gimeno Meliá ဟုသူကပြောသည်
ငါ Z က 6.0 သို့လည်းနောက်ဆုံးမှာ update လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်
David Gimeno Meliáအားပြန်ပြောပါ